Mateo 19 NA-TWI - Awaregyae - Yesu wiee n’asɛnka no, - Bible Gateway
Mateo 19 Nkwa Asem (NA-TWI)
19 Yesu wiee n’asɛnka no, ɔkɔɔ Galilea. Ofi Galilea no, otwaa asubɔnten Yordan baa Yudea. 2 Nnipadɔm tu dii n’akyi ma ɔsaa wɔn yare. 3 Farisifo bi ba bebisaa no nsɛm bi, pɛe sɛ wɔnam wɔn nsɛmmisa no so ma ɔka asɛm bi a, ɛde no bɛkɔ sɔhwɛ mu. Wobisaa no se, “Wopene awaregyae so anaa?”